35 CSS sy HTML menus ho an'ny finday, bilaogy, eCommerce ary bebe kokoa | Famoronana an-tserasera
Amin'ity indray mitoraka ity dia fotoana ho an'ny menus amin'ny HTML sy CSS izay ahafahanao mamelona Ampy tsara ireo singa manan-danja izay mamela antsika hitarika ny mpampiasa ho any amin'ireo faritra manan-danja indrindra amin'ny eCommerce, bilaoginay sy maro hafa. Miaraka amin'izy ireo izahay hanome izany kalitaon'ny kalitaon'ny tranokalanay izany ary araka izay azo atao hatrany amin'ny fenitry ny famolavolana UI.
1 Slide accordion menu
2 Swanky Pure CSS milatsaka
3 Lisitry ny Accordion
4 Menio mitsangana miaraka amin'ny jQuery sy CSS3
6 Menu radial
7 Zoro CSS HTML boribory
8 Hevitra momba ny menio peratra
9 Loko mipoitra voninkazo
10 Recverive Hover Nav
11 Fikarohana Dropdown
12 Zava-fisakafoanana dropdown CSS madio
13 Menio mamaly sy tsotra
14 Lisitry ny efijery feno ao amin'ny SVG
16 Hevitra iray hafa amin'ny Menu
17 Menu Design Material
18 Burger finday menio
19 Velocity.js flexbox efijery feno
20 Sarin'ny pejy feno lamba
21 Vokatry ny tsivalana amin'ny menu hover
22 Fomba fisainana tabilao CSS clip-path
25 Slider fitetezana
26 Fikarohana menio finday
27 Hevitra momba ny menio finday IPhone X
28 Manitatra Submenu ho an'ny finday
29 Fitaovana finday mihetsika
30 Menu miaraka amin'ny effets scrolling sy hover
31 Lisitry ny sivana finday
32 Fikarohana ivelan'ny lamba
33 Menu ao amin'ny tabilao CSS miafina
34 Bara fitetezana voafetra
35 Morphing kiheba
Un slide menu na menio sisin'ny hamburger misy ny sarimiaina mahafinaritra miaraka amina fika minimalist mba hisy vokany lehibe.
Swanky Pure CSS milatsaka
Lisitry ny Accordion
Este menio akondro es tena tsotra raha ampitahaintsika amin'ny roa teo aloha ny HTML, JS ary CSS.
Menio mitsangana miaraka amin'ny jQuery sy CSS3
Un menio mitsangana miaraka amin'ny jQuery sy CSS3 de fikasihana tsara ho an'ny fampiharana na tranokala. Ny karazana tetezamita sy gradien rehetra misy alokaloka kely indrindra.
Un menio boribory de fitetezana andrana izay miasa tanteraka amin'ny tranokala teknika. Vita amin'ny SVG sy GreenSock Animation Platform, hafa tsy misy isalasalana.
iray hafa menio radial ary fanandramana izay manan-kery tanteraka ho an'ny pejy natokana ho an'ny lalao.
Zoro CSS HTML boribory
Un menio boribory CSS HTML hametrahana azy eo aoriana sy izay manokatra boribory miaraka amin'ny traikefa nahafinaritra an'ny mpampiasa.
Hevitra momba ny menio peratra
Ao amin'io menio mofomamy ny rohy dia napetraka eo amin'ny tapany ambony amin'ny tsirairay hamoronana peratra isan-karazany.
Loko mipoitra voninkazo
Hafa manokana menio pop-up miaraka amina sary mihetsika tena tsara izay mamokatra vokatra lehibe.
Recverive Hover Nav
Recverive Hover Nav Is a menio milatsaka ambany kalitao ho an'ireo sarimiaina izay manondro tsara ny firafitry ny atin'ny tranonkala.
Un sakafo fitetezana dropdown mitovy amin'ny teo aloha na dia misy tints hafa aza amin'ny famolavolana interface.
Zava-fisakafoanana dropdown CSS madio
iray hafa menio dropdown kalitao ao amin'ny CSS izay manaraka ny fenitry ny famolavolana UI ankehitriny.
Menio mamaly sy tsotra
A efijery feno, ity menio mamaly sy tsotra amin'ny HTML5 sy CSS3 dia mifanaraka amin'ny Internet Explorer 11.
Lisitry ny efijery feno ao amin'ny SVG
Un menio efijery feno ao amin'ny SVG apetraka amin'ny sisiny ao anaty hamburger ary tena mahasarika ny maso izany.
Un Mega Menu amin'ny CSS sy HTML tsy mitovy amin'ny hita, miaraka amin'ny fomba maoderina sy minimalist.
Hevitra iray hafa amin'ny Menu
Hevitra iray hafa amin'ny Menu no safidy mety raha mitady menio hafa sy voalohany ianaoIty iray ity dia fisaorana lehibe fotsiny amin'ny menio manokana ao amin'ny kisary sy ny sarimiaina namboarina mafy.
Menu Design Material
Menu Design Material it is mifototra amin'ny fiteny famolavolana Google.
Burger finday menio
Velocity.js flexbox efijery feno
Velocity.js flexbox efijery feno dia menio an'ny kalitao lehibe amin'ny vokatra tratra ary ho an'ny traikefan'ny mpampiasa saika tokana. Fandefasana efijery feno amin'ny velocity.js.
Sarin'ny pejy feno lamba
Sarin'ny pejy feno lamba dia menio efijery feno kalitao avo lenta ary miasa tanteraka amin'ny fampisehoana Ahoana no fomba hamoronana tranokala miaraka amin'ireo soatoavina ireo.
Vokatry ny tsivalana amin'ny menu hover
Un mandroso menio vokany tsipika tsotra ary tena tsara.
Fomba fisainana tabilao CSS clip-path
Hevitra iray hafa an'ny menio misy clip-path misy sokajy tena mahaliana sy sokajy mihetsika sasany.
Strikethrough hover menio hafa io mandrosoa rohy mahaliana valiny.
Lavalamp CSS Menu mirakotra a alefaso ny sarimiaina ho an'ny rohy tsirairay izay mirona amin'ny dynamism.
Un slider fitetezana izay mihodina amin'ny rohy tsirairay hiavaka amin'ny loko mena sy sary mihetsika tsara karakarain'ny vokatra lehibe.
Fikarohana menio finday
Un fitetezana menio burger misy vokany lehibe mikendry ny finday.
Hevitra momba ny menio finday IPhone X
Un menio natao ho an'ny iPhone X izay afaka manome an'io kalitao io amin'ny tranokalanao mba hitovizany amin'ny famolavolana ny telefaona Apple.
Manitatra Submenu ho an'ny finday
Manitatra Submenu ho an'ny finday dia natao ho an'ny footer miaraka amina sary mihetsika mahafinaritra ary famindra toerana tena mety. Fahamarinana amin'ny ambaratonga rehetra ho an'ny interface finday amin'ny app na tranokalanao.
Fitaovana finday mihetsika
iray hafa sary mihetsika ho an'ny finday miaraka amina sary mihetsika boribory misy valiny hita maso.
Menu miaraka amin'ny effets scrolling sy hover
iray hafa fiatraikany lehibe ho an'ny menio hafa ary quirky. ATSINANANA menio miaraka amin'ny effets scrolling sy hover tonga lafatra ho an'ny trano fisakafoanana, hevitra ary maro hafa.
Lisitry ny sivana finday
Un finday fanivanana menio niova fo ho an'ny kinova tranonkala ary mikendry ny finday.
Fikarohana ivelan'ny lamba
Fikarohana ivelan'ny lamba Izy io dia menio izay andrana amin'ny tetezamita sy ny fitetezana ho tena ankehitriny. Raha mitady zava-baovao tsy ampoizina ianao, ny haavony no tsara indrindra eto amin'ity lisitra ity.
Menu ao amin'ny tabilao CSS miafina
Un menio amin'ny lafiny CSS inona no miafina ary toy izany koa no miseho miaraka amin'ny sary famantarana hamburger.
Bara fitetezana voafetra
fampiasana bootstrap fa tsy flexbox hanohanana ny IE9 / 10. Menio iray hafa tsara ho azy Bara fitetezana voafetra amin'ny foto-keviny.
Morphing kiheba menu io dropdown izay miseho rehefa manindry ianao eo amin'ny bokotra lehibe tab.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » Menus 35 amin'ny HTML sy CSS
Salama aho mahita fa mahaliana tokoa ireo menus samihafa misy eto amin'ity pejy ity, ny fanontaniako dia ny fomba fametrahana ireo fisie js amin'ny menio? Imbetsaka aho no nanandrana nanamboatra menio izay tsy manana js tsy miasa, na tsy afaka mametraka azy ireo, amin'ny fizahana ireo singa ao anaty fitetezana dia milaza fa ny fiasa izay hita aloha dia tsy voafaritra ary toy izany koa ireo menus rehetra
Fandraisana anjara tsara :)